केटा-केटीहरुमा टाउको दुख्ने समस्या - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
माघ २६, २०७३ डा. लालित कुमार मिश्र
काठमाडौं — शायद कुनै व्यक्ति नहोला, जसको जीवनमा कहिल्यै टाउको नदुखेको होस् । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा एक न एक पटक टाउको दुखेको समस्याबाट अवश्यपनि गुज्रिनु परेको हुन्छ । वास्तवमा टाउको अरु कुनै रोगको कारणले दुख्ने गर्दछ । जसलाई अग्रेजीमा 'हेडएक' भनिन्छ । यो आफैमा कुनै छुट्टै रोग होइन । अत्याधिक व्यस्त दिनचर्या, तनावयुक्त जीवन, भाग दौड, गलत आहार-विहारका कारण अचेल टाउको दुख्नु साधारण भएको छ ।
उहिले वयस्यकहरुमा टाउको दुख्ने समस्या देखिन्थ्यो भने अहिले युवा पिंढीमा पनि यो समस्या विकराल बनेर देखिन थालेको छ । अब यसको उमेरसँग कुनै संबन्ध नै रहेन । टाउको दुख्ने समस्या जहाँ पनि, जहिले पनि र जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ । प्रायजसो अचेल ९ वर्ष देखि १३ वर्ष उमेरका स्कुले केटा-केटीहरुमा पनि टाउको दुख्ने समस्या देखिन थालेको छ । आमाबुबालाई टाउको दुख्यो भन्दा अभिभावकहरुलाई पढन अल्छि लागेर या स्कुल जान मन नलागेर बहाना गरेको होला भन्ने लागि रहेको हुन्छ । उनीहरुको कुरा अभिभावकले गंभिरतापूर्वक लिंदैनन् । केटा-केटीहरुको सम्बन्धमा यस किसिमको सोचाई राख्नु ठिक होईन । उनीहरुको कुरा अभिभावकले बुझ्नु पर्दछ ।
टाउको दुख्ने कारण :
विभिन्न कारणले गर्दा टाउको दुख्ने गर्दछ । यही नै कारण हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिंदैन ।
भौतिक (शारीरिक) कारणहरु: दृष्ट्रीदोषको समस्या । जस्तै, (मायोपिया) टाडाको वस्तु देख्न नसक्नु । यो समस्या धेरैजसो केटा-केटीहरुमा पाईन्छ । चहकिलो प्रकाश या तेजिलो सुर्यको प्रकाश, ठुलोआवाज, होहल्ला आदिप्रति संवेदनशिलता । साईनोसाईटिस (पिनास), कानमा संक्रमण। हेमोग्लोबिनको स्तर सामन्यभन्दा कम हुनु या कमजोरी हुनु । अनियमित निन्द्रा, अनियमित जीवनशैली (जस्तै, समयमा खाना न खानु या भोकै बस्नु) । परीक्षा या साथीहरुको दवाव अथवा कक्षशिक्षकसँगको डिस्कसनको कारण तनाव उत्पन्न हुनु । अपच, कब्जियत वा पेटमा जुकापर्नु । लु-लाग्नु (सनस्ट्रोक) । रातिधेरै बेरसम्म जगरण बस्नु । मानसिक एवं भावनात्मक तनाव र कुन्ठ हुनु ।
शोक गर्नु र धैरै रुँदा पनि टाउको दुख्ने गर्दछ ।
माथि उल्लेखित कारणहरु सामान्य अवस्थामा टाउको दुख्ने कारणहरु हुन् । केही गंम्भिर प्रकृतिका रोगहरु पनि टाउको दुख्नेकारण हुन सक्छन् । जस्तै, हाइड्रोकेफलस (मस्तिष्क) मा पानि भरिनु, मस्तिष्कमा संक्रमण हुनु (मेनिन्जाईटीस, ईन्सेफ्लाईटीस, ब्रेन टीयुमर) हुनु । टाउकोमा गंम्भिर चोट पटक लाग्नु , नाथ्रिफुटनु (नाकबाट) रगत आउनु, दाँत दुख्नु आदि ।
लक्षण : पुरै टाउको दुख्नु, टाउको भारी हुनु, मन्दगतिले दुखि रहनु , कन पट्टिमा दुख्नु , टाऊँको निहुँराउदा दुखाई बढ्नु , हो-हल्लाले दखाई बढनु, सेक्दा, रुमालले टाउको बान्दा वा मालिस गर्दा दुखाइ कम भएको जस्तो लाग्नु चिसोपानीले टाउको धुँदा आराम हुनु, शान्त कोठामा सुत्दा आराम मिल्नु । आदि लक्षणहरु देखिन्छन् ।
रोग निवारणका उपायहरु : रोगको मुलकारक तत्वलाई पहिचान गरी, उपचार गर्ने होभने टाउको दुख्ने समस्याबाट पूर्णरुपले छुटकारा पाउन सकिन्छ । यदि टाउको दुख्ने समस्या बाह्य रहेछभने, केटा-केटीहरुको अनियमित निन्द्रा, समयमा खानाखाने वा उसको जीवनशैलीमा सामान्य सुधार गरिदिनुका साथै अभिभावकले अलिक समय दिने होभने यस समस्याबाट सहज रुपले नै छुटकारा पाउन सकिन्छ । कुनै औषधि उपचार को आवश्यकता पनि पर्दैन ।
यदि टाउको दुख्ने समस्याको कारण आन्तरिक रहेछभने माथि उल्लेख गरिएको रोगहरुको कारणले समस्या देखिएको हो भने तत्काल चिकित्सा कहाँ जाँच गराउनु पर्द५ । यस अवस्थामा अभिभावकहरुले तुरन्त ध्यानदिनु पर्ने हुन्छ । केटा-केटीहरुको कमजोर दृष्ट्रीको लागि एक योग्य आखाँरोग बिशेषज्ञ द्वारा परिक्षण गराई सुधारात्मक चश्माको प्रयोग गर्नाले ठिक हुन सक्छ । यस्तै, हेमोग्लोबिनको स्तर कम छ या कमजोरी छ भने कुनै बालरोग बिशेषज्ञको सल्लाह अनुसार निर्धारित टोनिकको सेवनले शरीरमा कम रहेको रातो रक्तकण लाई लेबलमा ल्याउन सकिन्छ । कसै-कसैको शरीर आन्तरिकरुपले भित्रैबाट कमजोर हुन्छ । यसकारण यिनीहरु चमकिलो प्रकाश, ठुलो आवाज, हो-हल्ला, तेजगंन्ध, तनाव आदिप्रति अतिसंवेदनशील हुन्छन् । जसको कारण यिनीहरुको शरीरले यि बाहरी कारकतत्वहरुको सामना गर्न असमर्थ हुन्छन । यसैगरी कानको संक्रमण- वाहृय र भित्रि कानको प्वालमा किटाणुबृद्धी हुने अवस्था जसलाई ओटाईटिस-एक्सटर्ना भनिन्छ, यि सब कमजोर ईम्युनिटीको कारण हुन्छन् । यस किसिमको समस्याहरुमा होमियोप्याथिक औषधिहरु निकै प्रभावशाली हुन्छ र व्यक्ति बिशेषको शरीरको प्रतिरक्षात्मक शक्तिको स्तरलाई बढाई यथाशिघ्र बिरामीलाई प्राकृतिक रुपले स्वस्थ्य लाभ गराउनमा सहयोग गर्छ । होमियोप्याथिकको विषेशता के हो भने यसको कुनै दुषप्रभाव (साईड-ईफेक्ट) हुँदैन ।
औषधि: केटा-केटीहरुमा टाउको दुख्ने समस्याको लागि लक्षणअनुसार प्रयोग हुने केहि औषधिहरु निम्नलिखित छन् । (१) नेट्रमा-म्युर : घामको कारणले टाउको निधारको देब्रे पट्टी दुख्नु, आखाँमा स्ट्रेस हुनु या मानसिक तनाव हुनु । यस किसिमको लक्षण भएमा यसको प्रयोग लाभदायक मानिन्छ । (२) बेलाडोना: टाउको निधारको दाहिने पट्टी दुख्नु , अनुहार रातो हुनु, घामको कारणले टाउको दुख्नु, तेजप्रकाश सहन नसक्नु आदि । यसकिसिमको अबस्थामा यस औषधिको प्रयोग गर्नसकिन्छ । (३) ग्लोनाइन : प्रचन्ड घाम वा लु-लाग्नुको कारणले टाउको दुखेको र बिरामीले पछाडि पट्टी टाउको लादा आराम महशुश हुनु आदि जस्ता लक्षण देखिएमा यस औषधिको उपयोग गरिन्छ । (४) सिड्रन: अत्याधिक टाउको दुख्नु, जुन प्राय, ठिक एउटै समयमा दुख्ने गर्छ । यस अवस्थामा यसको प्रयोग हितकर हुन्छ । (५) आर्जेन्टम नाईट्रिकम- आखाँमा बढी दवाव परेको कारणले यदि टाउको दुख्छ भने यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । (६) पेटमा जुकाँ पर्नाले टाउको दुखेको हो भने – टियुक्रियम, नेट्रमफोस, सिना आदि औषधिको प्रयोग लाभदायक मानिन्छ । यसबाहेक कल्केरियाफाँस, कालिफाँस, ब्रायोनिया, जेल्सिमियम औषधिहरुको प्रयोग रोग तथा रोगीको अवस्था हेरिकन लक्षणअनुसार गर्न सकिन्छ । प्रत्येक व्यक्ति (बिरामी) एक अर्काबाट भिन्न हुन्छन् र उसको रोग लाग्ने कारण पनि भिन्नै हुनुको साथै उसको पीडा पनि बेग्ले किसिमको हुन्छ। यसकारण समष्टिगतरुपले (पूर्ण उपचार) उपचारको लागि कुनै योग्य तथा अनुभवि होमियोप्याथिक चिकित्सकसँग परामर्श लिइ निर्धारित औषधिको सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७३ १४:४२
सामान्य प्रसव गराउन होमियोप्याथी उपचार
माघ ११, २०७३ डा. लालित कुमार मिश्र
काठमाडौं — सरकारी तथा गैरसरकारी (निजी) अस्पताल तथा नर्सिंगहोमहरुमा दिन प्रतिदिन बढि रहेको सिजेरियन डिलेभरीको संख्यात्मक बृध्दिदरले अधिकांश महिलालाई अप्ठयारोमा पारिदिएको छ । विवाहित सवै महिलाहरु गर्भवती भएको अवस्थामा यही चाहन्छन कि मेरो प्रसव प्रकृतिक रुपमा स्वभाविक किसिमले होस् । अपरेसन गर्न नपरोस । तर, यो कुरा आधुनिक चिकित्सामा सधै र सबै गर्भवती महिलाका लागी सामान्य प्रसव गराउन संभव हुँदैन र छैन पनि ।
सामान्य रुपले हेर्ने हो भने १०% प्रतिशत महिलाहरुमा स्वभाविक रुपले प्रसव भएको पाईएतापनि ९०% प्रतिशत डिलेभरी केसेज्मा सिजेरियन सक्सन वा यान्त्रिक (औजारहरु) को प्रयोग गरी डिलेभरी गराईएको पाईन्छ । प्रसव र डिलेभरीमा के फरक छ ? यी दुवै को अर्थ एउटै हो त ? यसो झट्ट हेर्दा एउटै जस्तो लाग्दछ । तर, होइन यि दुवैमा धैरे फरक छ । फरक यस्ताछन्, १. महिला प्रजनन प्रणालीका विभिन्न चरणका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरुलाई पार गर्दै गर्भास्था मा रहेका भ्रुण महिलाको योनीमार्गबाट प्रकृतिक रुपले तथा स्वभाविक ढंगबाट बाहिरी संसारमा आउनु अर्थात निस्किनुलाई प्रसव भन्दछन् । यसैगरी ठिक समयमा जीवित जन्मिएको र बाँच्न सक्ने भ्रुण निस्किनुलाई सुतकेरी हुनु भनिन्छ । डिलिभरी भनेको त गर्भमा भएको बच्चालाई जुनसुकै तरिका अपनाएर भएपनि बच्चालाई बाहिर निकाल्नु हो । यो काम सिजिरियन-सेक्सन (पेटचिरेर) वा महिलाको योनीमार्ग मा यन्त्र (औजारहरु) को प्रयोग गरेर पनि बच्चा निकालन सकिन्छ । यही फरक छ सामान्य प्रसव हुनु र डिलेभरि हुनुमा । तर, गाउँ-घरको बोलचालको भाषामा प्रसव हुनुलाई पनि डिलेभरी हुनु भनिन्छ । यही कारणले हो कि अचेल हाम्रो समाजमा प्रसव हुनु/सुतकेरी हुनुको ठाऊँ- डिलेभरी हुनु भन्ने शब्दले लिएको छ। सामान्य प्रसव: १. समय पुगेर आफै प्रसवपीडा (व्यथा) लागेको । २. भर्टेक्सप्रेजेन्टेशन अर्थात बच्चाको टाउँको ठिकसंग योनीको मुखमा बस्नु । ३. प्रसवको अवधि अनावश्यक लामो न भएको । ४. धैरे सहयोग गर्न नपरिकन आफै प्रकृतिको माध्यमबाट नै सुत्केरी भएको । ५. आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा धैरे प्रतिकुल असर नपरेको ।
असमान्य प्रसव: माथि उल्लेखित सर्तहरु पुरा नगरेको कुनै पनि प्रसवलाई असमान्य प्रसव भनिन्छ । भर्टेक्सप्रेजेन्टेशन बाहेक अरु किसिमको प्रेजेन्टेशन वा अन्य कुनै प्रकारको जटिलता भएमा, जस्तै: बच्चा उल्टो हुनु वा बच्चाको हात बाहिर निस्किनु आदि । यि कुराहरु असामान्य प्रसवको परिभाषा भित्र नै पर्दछ । महिलाको सुत्केरी हुने वा व्यथा लाग्ने कुरा व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक पर्दछ । तैपनि अन्तिम महिनावारी भएको दिनमा ३ महिना घटाएर ७ दिन जोडेमा मोटा-मोटी समयको अन्दाज गर्न सकिन्छ । बदलिदो जीवनशैली खानपान रहन–सहनको कारण सामान्य प्रसव हुनु आजको समयमा असंभव जस्तो लाग्दछ । तर, तपाई गर्भावस्था-प्लानिङ गर्ने बेला केही कुराको ध्यान राख्ने होभने असंभव पनि संभव हुन सक्छ । यसको लागि जरुरी छ पोष्टिक खान-पान तथा गर्भावती महिलाको हेर विचार । गर्भधारण गर्नुपूर्व आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु जरुरी छ । यदि तपाईलाई कुनै प्रकारको रोग छ भने- त्यसको असर हुनेवाला बच्चामा पनि पर्न सक्छ । डिलेभरी हुने समयमा जब नर्मलडेलिभरी हुँदैन जटिलअवस्था छभने त्यसबेला अपरेशन गरिन्छ । यस सर्जरीको माध्यमले महिलाको पेटचिरेर बच्चालाई बाहिर निकालिन्छ। यदि पहिले पनि सिजिरियनबाट नै बच्चा डिलिभरी भएको होभने यसपालि पनि अपरेसन गर्ने नै सल्लाह दिईन्छ। यस्ता महिलाहरु जो सामान्य डिलेभरी होस् भन्ने चाहन्छन् ।
उनीहरुको लागि होमियोप्याथी चिकित्सा संजीवनी सावित हुन्छ । गर्भवति महिलाले कुनै योग्य होमियोप्याथिक चिकित्सकसंग समय मै भेटेर सल्लाह अनुसार नियमित रुपमा होमियोप्याथिक औषधिको सेवन गरेमा ९०% प्रतिशत महिलाहरुमा सामान्य प्रसव हुन्छ । उहिले गाउँहरुमा स्वास्थ्य सेवा विभागको पहुँच हुँदैन थियो । स्वास्थ्य चौकी र औषधिको अभाव रहन्थ्यो । त्यसबेला धैरे जसो प्रसव गाउँ घरमा नै गराईन्थ्यो। यसका लागि गाउँघरका बृद्ध महिला (सुडेनी) को सहायता लिईन्थ्यो । यस किसिमको प्रसवमा आमा र बच्चा दुबैको ज्यानको खतरा हुने संभावना बढि हुन्थ्यो र कयौंको ज्यान समेत जान्थ्यो। यस किसिमको अनभिज्ञ सुडेनीबाट असुरक्षित प्रसव गराउदा ज्यान जानेको संख्यात्मक बृद्धि देखिएको हुँदा यस कार्य माथि रोक लगाउन सरकारले गाउँ-गाउँमा हेल्थपोस्ट खोल्यो । जिल्लास्तरका अस्पतालहरुमा प्रसुती महिलाहरुलाई बिषेश सुबिधा दिईन थाल्यो । यसबाट बच्चाको मृत्युदरमा कमि हुन थाल्यो । तर, अर्कोतर्फ यसको साईड ईफेक्ट के देखियो भने दिनोदिन सामान्य डिलेभरी हुने ठाउँमा अपरेशन गर्ने महिलाहरुको संख्या बढ्न थाल्यो ।
के हो सिजिरियन डिलिभरी ?
सिजिरियन सेक्सन-शल्यक्रियाको माध्यमबाट महिलाको पेटचिरेर बच्चालाई बाहिर निकाल्ने कार्यलाई सिजेरियन-सेक्शन भन्दछन् । सामान्य डिलेभरी हुनुपर्ने ठाउँमा सिजेरियन अपरेसन गर्नु पर्नका कयौं कारणहरु छन् । जस्तै: महिलाको गर्भमा बच्चा उल्टो बसेको छ या बच्चा माथितिर सरेको छ अथवा महिला को नितम्ब (पेलिभिकबोन) साँगुरो छ । बच्चा ज्यादै स्वस्थ्य तथा टाउको ठुलो छभने यस्तो अवस्थामा सुरक्षित प्रसव गराउन तथा आमा र बच्चा दुबैलाई बचाउनको लागि अपरेशनको आवश्यकता पर्छ । उपरोक्त अवस्था मा यदि सामान्य प्रसव गराउने कोशिस गरेको खण्डमा बच्चाको शरिर आधी बाहिर-निस्किन्छभने आधी भित्रै फस्छ । यसबाट बच्चालाई साँस फेर्न अपठ्यारो हुन्छ । यस अवस्थामा बच्चाको मृत्यु हुने गर्दछ। यस किसिमको खतरनाक परिस्थितिबाट बच्नको लागि सिजेरियन सेक्सन अर्थात अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।
होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने ?
गर्भ जव तीन महिनाको हुन्छ । महिलाले कुनै योग्य तथा अनुभवि होमियोप्याथिक चिकित्सकसंग परामर्श गर्ने । चिकित्सकद्वारा दिएको औषधिको नियमितरुपले सेवन गर्नका साथै निर्देशनको पालना गर्ने । समय पुरा भएपछि सामान्य डिलेभरि हुन्छ। यस्ता कयौं केसेज् पनि छन् जसको पहिलो बच्चा अपरेशन गरेर भएको थियो । उही महिलाको दोश्रो बच्चा होमियोप्यथिक औषधिको प्रयोग ले सामान्य (नर्मल) डिलेभरी भयो । प्रसवबेदना- कुनैपनि महिलाको लागि एउटा ठुलो अपरेसन गरे समान नै हुन्छ । यस कार्यको लागि होमियोप्याथिक औषधि – कोलोफाईलम- ३० शक्ति डिलेभरी हुनु भन्दा महिना दिन अगाडीबाट खान शुरु गर्नाले प्रसव सरलतरीका ले स्वभाबिकरुपमा हुन्छ । यसै प्रकार पल्साटिला-१००० शक्ति चार घन्टा को अन्तरालमा तीन मात्रा सेवन गरेमा सामान्य र सुरक्षित डिलेभरी हुन्छ । यसको साथै यदि बच्चाको पोजिशन उल्टो छभने पनि यस औषधिले बच्चालाई उचित पोजिशनमा ल्याएर राखिदिन्छ । यस औषधिको प्रयोग (मेम्ब्रान्स) झिल्लि फुटनु भन्दा पहिले नै प्रर्योग गर्नु पर्दछ। यदि गर्भाशयमा बच्चाको विकाश हुने क्रम बन्द भएकोछभने यस अवस्थामा- सिकेलिकार्टुनम-१००० शक्तिको एक मात्राको प्रयोगले भ्रुणको विकाश पुन: शुरु हुन थाल्छ। शल्यक्रिया गरेपछि सिलाइ गरेको भाग (पेट) मा स्थायी रुपले दर्द हुन्छ। यसको लागि स्टेफसिग्रिया-१००० शक्तिको एक मात्राको सेवनले २४ घन्टा भित्र पोस्ट अपरेटिभ समस्याबाट राहत दिलाउछ। यसप्रकार होमियोप्याथिक उपचार गर्भावस्था, प्रसुतिवस्था र प्रसुतिपछि हुने समस्यामा पनि प्रभावकारी छ। अस्तु ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७३ १६:४३